အီရတ်နိုင်ငံတွင် သဲမုန်တိုင်း ထပ်မံတိုက်ခတ် - Xinhua News Agency
အီရတ်နိုင်ငံ ဘဂ္ဂဒတ်မြို့တွင် မေ ၁၆ ရက်က သဲမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်နေချိန် အမျိုးသားတစ်ဦးကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဘဂ္ဂဒတ်၊ မေ ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အီရတ်နိုင်ငံတစ်ဝန်း မေ ၁၆ ရက်က သဲမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ရာ လူပေါင်း ၂,၀၀၀ ကျော် အသက်ရှူဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်၍ ဆေးရုံတက်ရောက်ခဲ့ရပြီး လေဆိပ်များ၊ စာသင်ကျောင်းများနှင့် အချို့အစိုးရရုံးများ ပိတ်ထားခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။အီရတ် အာဏာပိုင်များက ဆိုးဝါးလှသော သဲမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ခြင်းကြောင့် ဘဂ္ဂဒတ်၊ Najaf နှင့် Sulaimaniyah စသည့်လေဆိပ်များတွင်လည်း လေကြောင်းပျံသန်းမှုများကို နာရီများစွာကြာ ပိတ်ထားခဲ့ရကြောင်း အီရတ် တာဝန်ရှိသူများအဆိုအရ သိရသည်။
အီရတ်နိုင်ငံ ဘဂ္ဂဒတ်မြို့၌ သဲမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်နေသည်ကို မေ ၁၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
မေ ၁၆ ရက်က တိုက်ခတ်ခဲ့သော သဲမုန်တိုင်းသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၏ ရလဒ်အဖြစ် ယခင်လက အီရတ်နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့သော မုန်တိုင်းများစွာအနက် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ရာ သဘာဝပေါက်ပင်များကို ဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပြီး သဲကန္တရပုံစံလျင်မြန်စွာ ဖြစ်ပေါ်သွားခဲ့သည်။
အီရတ်နိုင်ငံ ဘဂ္ဂဒတ်မြို့ရှိ ဆေးရုံတစ်ရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေသူတစ်ဦးအား မေ ၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အီရတ်နိုင်ငံ ဘဂ္ဂဒတ်မြို့တွင် သဲမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်နေသည်ကို ဧပြီ ၁၂ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အီရတ်နိုင်ငံ မိုးလေဝသနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများကလည်း ဖြေရှင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်အတူ နိုင်ငံသားများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် အသက်အိုးအိမ်များအပေါ် မုန်တိုင်းများ များပြားလာခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို သတိပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
#Iraq, #DustStorm, ##Xinhua, #Myanmar, #XinhuaMyanmar, #အီရတ်, #သဲမုန်တိုင်း, #ဆင်ဟွာ, #မြန်မာ, #ဆင်ဟွာမြန်မာ
Mideast in Pictures: Dust storm sweeps Iraq again!
BAGHDAD, May 16 (Xinhua) — A dust storm swept across much of Iraq on Monday, sending more than 2,000 people to hospitals with respiratory problems and forcing the closure of airports, schools and some government offices.
The severe dust storm forced the Iraqi authorities to suspend flights for several hours in Baghdad, Najaf, and Sulaimaniyah airports, according to Iraqi officials.
Monday’s dust storm is one of the several storms that hit Iraq during the past month asaresult of climatic change, lack of vegetation cover, and rapid desertification.
Iraqi meteorologists and health officials have warned of the impact of the increasing storms on the health and lives of citizens in the absence of solutions.
Photo 1 : A man is seen during dust storm in Baghdad, Iraq, on May 16, 2022. A dust storm swept across much of Iraq on Monday, sending more than 2,000 people to hospitals with respiratory problems and forcing the closure of airports, schools and some government offices. (Xinhua/Khalil Dawood)
Photo2: A dust storm hits Baghdad, Iraq, on May 16, 2022. A dust storm swept across much of Iraq on Monday, sending more than 2,000 people to hospitals with respiratory problems and forcing the closure of airports, schools and some government offices. (Xinhua/Khalil Dawood)
Photo3: An Iraqi patient receives medical treatment atahospital in Baghdad, Iraq, on May 05, 2022. (Xinhua/Khalil Dawood)
Photo4: A strong dust storm hits Baghdad, Iraq, April 12, 2022. (Xinhua/Khalil Dawood)■
အီရတ်နိုင်ငံ ကာဒစ်စတန်မြို့တော် ဒုံးကျည်အမြောက်အမြားဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရ
အီရတ်နိုင်ငံက ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းရေနံစိမ်း စည်ပေါင်း ၉၃ သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့